Taliyihii horinta 7aad ee ciidanka badda Maraykanka oo la eryey - BBC News Somali
Taliyihii horinta 7aad ee ciidanka badda Maraykanka oo la eryey
Image caption Adm Joseph Aucoin
Taliska guud ee ciidammada badda Maraykanka ayaa shaqada ka eryey taliyaha horinta todobaad ee ciidammada badda Maraykanka Admiral Joseph Aucoin kadib shilal dhawr ah oo maraakiib dagaal ay isku dhaceen baddaha Aasiya.
Tobon badmaaxiin ah ayaa wali la la'yahay kadib markii markabka dagaalka ee USS John S McCain uu ku dhacay markab shidaal sidey meel u dhow dalka Singapore maalintii isniinta.
Saraakiisha ciidammada badda ayaa sheegay in la helay haraaga jir bini'aadam markabka dushiisa, kaasi oo ku xiran dekada Singapore.
Shilkan ayaa waxa uu ahaa kii afaraad ee muddo sannad ah gudihiisa dhacay, taasi oo keentay in taliska ciidammada badda Maraykanka ay sheegaan in ay lumiyeen kalsoonidii ay ku qabeen taliye Joseph.
Horinta toddobaad ee ciidammada badda oo fadhigeedu yahay magaalada Yokosuko ee dalka Japan ayaa ah tan ugu balaaran ciidammada badda Maraykanbka, waxayna ka koobantahay illaa 70 gaadiidka dagaalka badda.
Shilkii ugu dambeeyay ee dhacay ayaa waxa uu horseedey in Maraykanka uu joojiyo hawlgaladdii ciidammada badda ee adduunka oo dhan muddo kooban, taasi oo noqotay wax cusub.
Markabka USS John S McCain ayaa waxaa soo gaaray burbur xooggan oo kasoo gaaray dhinac halkaas oo uu ka duleeshamay, waxaana dhacday in ay biyo badan galaan gudaha markabka.
Maraakiib Maraykanka ah, Malesia, iyo Singapore ayaa ku guda jira baadigoobka 10-ka badmaax ee maqan.
Markabkii kale ee shidaalka ee ay kan dagaalka isku dhaceen ee Alnic MC ayaa isaga waxaa soo gaaray qasaaro, hase yeeshee ma jirin wax shaqaale ah oo ku dhaawacmay ama wax shidaal ah oo ka daatay.
Labo bilood ka hor toddobo ciidammadaiibta ciidammada Maraykanka kadib shil dhexmaray markabka dagaalka ee USS Fitzgerald iyo markab xamuul ah oo Japanka leeyahay meel u dhow dekada Yokusuka ee Japan.
Taliska ciidammada badda Maraykanka ayaa sheegey in koox ka mid ah askarta lagu samayn doono anshax marin kadib markii sida la sheegey ay sameeyeen dayacaad shaqo.
Bishii May markab ay ku rakibanyihiin gantaalada liishaaman ayaa ku dhacay markab kalluumeysi oo laga leeyahay Kuuriyada Koonfureed, halka bishii Janaayo sidoo kale markabka gujis ah ayaa afka dhulka la galay saldhigga horinta 7aad ee Yokosuka.